के तपाईंलाई थाहा छ ? प्याजले करिब तीन घण्टा यौ’न आनन्द दिन्छ,कसरी प्रयोग गर्ने ? – Online Khabar 24
के तपाईंलाई थाहा छ ? प्याजले करिब तीन घण्टा यौ’न आनन्द दिन्छ,कसरी प्रयोग गर्ने ?
पुरा खबर पहिले यो भिडियो ,
सलाद होस् वा तरकारी र अचारमै किन नहोस् प्याज धेरै खाइने चिज हो । स्वादका लागि खाइने प्याजको गुण केवल खानालाई स्वादिलो तथा बासनादार बनाउनेमा मात्र सिमित छैन ।
प्याजमा विभिन्न औषधिय गुण पनि पाइन्छन् र यसको सेवन स्वास्थ्यका लागि हितकर हुन्छ । विज्ञहरुका अनुसार कतिपय स्वास्थ्य समस्याको रोकथाम र उपचारमा प्याज लाभदायक हुन्छ ।
यसका केहि यस्ता छन् अन्य फाइदा :
प्याज खानाले पेटमा पाचन रसको उत्पादन बढ्दछ । जसका कारण हामीले खाएको खानेकुरा राम्रोसँग पच्दछ र पाचन सम्बन्धी समस्या पनि कम हुन्छ ।प्याजको रसमा मह मिलाएर खानाले ज्व’रो, रुघा’खो’की, तथा घाँटी खसख’स गरेको र एलर्जी जस्ता समस्यामा राहत मिल्दछ ।प्याजमा क्रो’मियम तत्व हुन्छ जसले रगतमा भएकेा चिनीको मात्रा अर्थात् ब्ल’ड सुग’र नियन्त्र’णमा मद्दत गर्दछ ।
Prevघ्यु कुमारी यसरी प्रयोग गर्न जान्ने हो भने दर्जनौं रो’गबाट मुक्त
nextझरनामा नुहाउने क्रममा चि’प्लिएर युवकको मृ’ त्यु !